Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo gaaray Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo gaaray Kismaayo
A warsame 27 December 2014 27 December 2014
Mareeg.com: Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka KMG ah ee Koonfur-galbeed Somalia, Shariif Xasan Sheekh ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarrunta gobolka Jubada Hoose.
Madaxweynaha maamulka Juba, Axmed Madoobe iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamlukaas ayaa wafdiga Shariif Xasan kusoo dhaweeyay Kismaayo.
Shariif Xasan ayaa l sheegay inuu doonayo Iskaashi uu la sameeyo maamulka Juba, maadaama ay labada maamul yihiin soohdin wadaag.
Booqashada Shariif Xasan oo ah tii ugu horreysay ee uu ku tago Kismaayo tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Maamulka Juba ayaa horay u taageeray doorashada Shariif Xasan, maadaama uu qabay in maamulka Koonfur Galbeed ku koobnaado gobollada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Shariif Xasan oo horay uga tirsanaa xildhibaannada baarlamaanka ayaa loo xilka madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed loo doortay 17-kii bishii hore ee November ee sanadkan, kaddib muran iyo buuq badan oo sameynta maamulkan ka dhashay.
Sarkaal Alshabaab ah oo Mareykanku ku raadinayey $3 Milyan dollar oo isu dhiibay dowladda Soomaaliya
Maxey Amisom xilka uga qaaday Col. Cali Aadam Xumud?